Ogaden News Agency (ONA) – Tahriibayaal Ku Dhintay Badda U Dhaxaysa Giriiga & Turkiga.
Tahriibayaal Ku Dhintay Badda U Dhaxaysa Giriiga & Turkiga.
Dad lagu qiyaasay 33 tahriibayaal ah ooy ku jiraan Caruur iyo Haween ayaa subaxnimadii Sabtida ku dhintay bada u dhaxeysa Turkiga iyo jasiiradaha dalka Giriiga. Telefishinka dalka Turkiga ayaa sheegay in ciidamada bada ee wadankaasi ay soo badbaadiyeen dad gaaraya 75 qof.
Doonida gadoontay ayaa la sheegay inay ka baxday gobalka Kanakkale (Canakkale) ee waanka Turkiga. Waxayna kusii jeeday jasiirada Lesbos ee wadanka Giriiga. Bilihii lasoo dhaafay ayay sii badanayeen tirada dadka ku dhimanaya doonyaha Tahriibta ah ee ka yimaada wadanka Turkiga.
Waxay hada gaadhayaan 250 qof tirada bishan Janaayo oo kaliya ku dhintay badda (Aegean Sea) ee u dhaxaysa wadamada Giriiga iyo Turkiga. Warar kale ayaa intaas ku daraya inay jiraan dad aan lahayn raq iyo ruux toona oo laraadinayo.